नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दोहा, यसरी नै पट्यारलाग्दो ढंगमा कहिलेसम्म शुक्रवारे कार्यक्रम गरिरहने ?
दोहा, यसरी नै पट्यारलाग्दो ढंगमा कहिलेसम्म शुक्रवारे कार्यक्रम गरिरहने ?
- दिपक पुडासैनी
छ दिनसम्म काममा घोटिएपछी हप्तामा एक दिन बिदा हुन्छ प्रवासमा । शुक्रबार, यहि बिदाको दिनलाई प्रवासमा गठन भएका र संगठन बनाएका संघसंस्थाहरुले भेला, अधिवेशन, पिकनिक वा साँस्कृतिक कार्यक्रमका नाममा आ–आफ्ना कार्यक्रमहरु यसै दिनलाई तय गर्ने गर्दछन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो बर्षमा ५२ शुक्रबार पर्छ । कतारकै हकमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुतावासमा सुचिकृत भएका वा नभएका समेत गरी २ सयको
हाराहारीमा संघसंस्था भइसकेका छन । कुनै संस्थाको कार्यक्रममा जानुुपर्छ आएको भएपनि नआएको भएपनि त्यहाँ उद्घोष गरिएको अतिथीको संख्या हेर्दा लाग्छ ५ सय भन्दा बढी त अतिथी नै होलान ।
अँ अतिथी भन्दा मलाई कतारमा आएर बिभिन्न संस्थाहरुको कार्यक्रमहरुमा जान थलेपछी अतिथीको नयाँ परिभाषा थाहा हुन आएको छ । अझ भनौ मैले नयाँ ज्ञान हाँसिल गरेको छु । त्यो के भने नेपालमा हुँदा मैले बुझेको अतिथी भनेको आफ्नो घरभन्दा बाहिरबाट आएका पाहुनालाई बुझिन्थ्यो । आफ्नो घरमा आएका पाहुनालाई घरका सबै सदस्यले उचित आदर, सत्कार, मान सम्मान र आतिथ्यता प्रदान गर्ने गरिथ्यो र अतिथीलाई देवता समान मान्ने गरिन्थ्यो । तर कतार आएर बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा भने मैलै अतिथीको परिभाषा अलि फरक ढंगले बुझ्न पुगेको छु । त्यो के भने कार्यक्रम आयोजक संस्थाका सबै पदाधिकारी अतिथी हुदा रहेछन अर्थात बाहिरबाट आएका त भइ नै हाले आफ्नै घरका पनि सबै अतिथी । बा अतिथी, आमा अतिथी, श्रीमान अतिथी, श्रीमती अतिथी, छोरा अतिथी, बुहारी अतिथी, छोरी अतिथी, अर्थात जतिजना परिवारमा छन् सबैजना अतिथी । धन्न कार्यक्रमा संचालकले म फलानो अतिथीको आसन ग्रहण गर्दैछु भनेको सुुनेको छैन । कुनै दिन त्यसो भनिहालेछन भने पनि मलाई चाहिं अचम्म नलाग्ने भईसकेको छ ।
कार्यक्रम र अतिथीकै सवालमा भन्नुपर्दा यतिसम्म लापर्वाही हुन्छ कि त्यहाँ पुगेका सहभागीलाई बेकारै आएजस्तो बनाउँछन । सर्बप्रथम त कार्यक्रमको लागि निम्तो आउँछ बिहान ठिक ९ बजे उद्घाटन हुने भनेर । १०.३० बजेतिर बल्ल आयोक संस्थाका प्रतिनिधीहरु ब्यानर च्यापेर लुरुलुरु लर्किन्छन । ११.१५ तिर हामी कार्यक्रम शुरु गर्न गैरहेका छौ भनेर जानकारी गराइन्छ र बल्ल १२ बजेतिर कार्यक्रम केहि ढिलो हुन गएकोमा माफी चाहन्छौ भन्दै उद्घोषक भट्याउन थाल्छन र अधिघन्टा उनी फलाकिसके पछी अतिथीको आसनग्रहण आरम्भ हुन्छ । र २ बजेसम्ममा बल्ल थप अतिथीलाई पुन बोलाउने गरी कार्यक्रम औपचारीक उद्घाटन गरीन्छ ।
त्यहाँ उपस्थित ४० जना नै किन नहुन उद्घोषकको हातमा भएको ३ सय, ३ सय ५० जतिको नाम र संस्थालाई अतिथीको आसन ग्रहण गर्न निम्त्याउँछन ।
अब अतिथी कस्ता कस्ता हेरौ है त उदाहण
क नामक संस्थाका अध्यक्ष ...ज्यू, क नामक संस्थाका सल्लाहकार... ज्यू, क नामक संस्थाका बिशिष्ट सल्लाहकार ...ज्यू, क नामक संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष... ज्यू, क नामक संस्थाका द्धितिय उपाध्यक्ष....ज्यू, क नामक संस्थाका सचिव ज्यू, अर्थात एउटै संस्थाका आधादर्जन भन्दा बढीलाई मञ्चमा बोलाइन्छ । थाहा छैन त्यहाँ क नामक संस्थाको कसले प्रतिनिधित्व गर्दैछन ।
अब आयोजक संस्थाकै अतिथीको बारेमा त मैले माथी नै उल्लेख गरीहाले । अरु १ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका अतिथीको आसन ग्रहण पनि त्यसरी नै हुने भै हाल्यो ।
कार्यक्रम आयोजक मात्रै हैन अतिथी भनिएकाहरु पनि बिहान ९ बजेको निम्तो मान्न दिउँसो २ बजेतिर लाजै नमानी लुरुलुरु पुग्छन । अनि कहिलेकाहिं उद्घोषकले यो पनि भनेको सुनिएको छ, फलानो संस्थाका फलानो ज्यू हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउन भर्खरै हलभित्र प्रबेश गर्नु भएको छ, उहाँलाई अतिथीको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दै कार्यक्रमका सभापति ज्यूलाई सभा बिसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
उनै भानुभक्तले लेखेको कविता
उनै भानुभक्तले प्रेरणाका श्रोत घाँसी
नामसम्म थाहा छैन लोकलाई
ती कर्मशिल घाँसीको
आफ्नो पसिना बगाई घाँस काटे
र त्यहि घाँस बेचेर आएको पैसाले
कुवा खनाए ।
आज पनि म पोखरा जाँदा
र पोखराबाट फर्कँदा
राजमार्गको छेवैमा रहेको
तिनै घाँसिले खनाएको कुवाको पानी पिउँछु र टाउको उठाएर हेर्छु,
नजिकै भानुभक्तको अर्धकदको सालिक ट्वाल्ल परेर मलाई नै हेर्छ,
तर म खोज्छु मेरो प्यास मेटाउन कुवा खनाउने घाँसिको सालिक, अहँ देख्दिन र भेट्दिन कहिँ कतै पनि,
न त कुवा खनाउने घाँसीको नाम
न त कुवा खनाउने घाँसीको सालीक ।
आज म एकैसाथ नमन गर्न चाहन्छु
श्रम र सेवाका आधार स्तम्ब नाम लुकाईएका तिनै घाँसीलाई
अनि नेपाली भाषा साहित्यका धरोहर आदिकवी भानुभक्त आचार्यलाई ।
- दिपक पुडासैनी, हाल, कतार